ရန်ကုန်မှာ အင်ဒိကြက်ကြော်များခေတ်စားလာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ရန်ကုန်မှာ အင်ဒိကြက်ကြော်များခေတ်စားလာ
Posted by fatty on Feb 21, 2011 in News | 13 comments
အင်ဒ်ုနီးရှားမှာ ဂျဖာ ကုမ္ပဏီ ဆိုတာနာမည်ကြီးပါ။
အဲဒီကုမ္ပဏီရဲ့ အခွဲက ရန်ကုန်မှာ ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ ဒုတိယ အကြီးဆုံးဆိုပါတော့။
ပထမ ကတော့ ယိုးဒယားက စီပီပါ။
အခုအဲဒီ အင်ဒို ကုမ္ပဏီက ကြက်ကြော်များကို စတင်ရောင်းချနေပါပြီ။
မဆလာက အင်ဒိုကဘဲမှာတာဖြစ်ပြီး ဟာလာ ထောက်ခံချက်နဲ့ပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီး အင်ဒိုလို့ဖတ်ပေးပါ google တောင်မနဲဖွင့်နေရတာမို့ အချိန်အတော်ယူရပါတယ်။
တလောက အင်တာနက်တွေ လိုင်းပျက်ချိန် နိုဝင်ဘာ ၇ မတိုင်ခင်က ရန်ကုန် ရောက်တဲ့ အချိန် အင်တာနက် မကောင်းလို့ ရေဆာ နေတဲ့ ကြက်ပေါက်တွေ အခု ဒယ်အိုးထဲတောင် ရောက်သွားကြပြီလား။ ကြီးတာ မြန်လိုက်တာနော်။ သတ္တ၀ါ တခု ကံတခုပေါ့လေ။ စောစောသေတော့ စောစော ဘ၀ ကူးတာပေါ့။
မြန်မာတွေရဲ့.. အဲဒီ.. သတ္တ၀ါသတ်တာတွေ..ဘာတွေညာတွေ.. ဆိုတဲ့.. အတွေးအခေါ်တွေက.. အလုပ်တွေ..စီးပွားရေးတွေကို ..နိုင်ငံတပါးလက်ထဲ ထိုးအပ်နေသလိုခံစားမိတာပါပဲ..။
ကောင်းကောင်းစားချင်ရင်..ကောင်းကောင်းမွေးမြူ..။ ကောင်းကောင်းသတ်နိုင်မှ.. လတ်ဆတ်ကောင်းမွန်တာလေးတွေ.. ကောင်းကောင်းစားရမယ်ဆိုတဲ့.. တိုက်ရိုက်လက်တွေ့ကျတဲ့အသိအစား… သူများသတ်တာကို… ကိုယ်က (အကျိုးအပြစ်ကျ တာဝန်မယူ) အချောင်ဝင်နှိုက်မယ်ဆိုတဲ့.. (ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဖြေသိမ့်တဲ့) အသိ…
အဲဒါက . တိုင်းပြည်စီးပွားရေး …”ဆွဲချ” ဖြစ်နေတာလို့ ..သုံးသပ်မိကြောင်း…။
ကျွန်တော်လဲ ခုဆို UAE က KFC မှာလုပ်နေတာပါ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်ချိန်တော့ ဒီကနည်းပညာတွေနဲ့ ဆိုင်ပြန်ဖွင့်မယ်စဉ်းစားထားတာပဲ
ဒါပေမယ့်လည်း ခုချိန်မှာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေ ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဖို့ အပြောင်းအလဲအများကြီး စောင့်ရပါဦးမယ်
အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိလာမယ်ဆိုရင် တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေတွေ တိုးလာမယ်..
ဒီလိုဆို လူနေမှုဘ၀တွေမြင့်တက်လာရင် ဒီလုပ်ငန်းတွေလဲ တိုင်းရင်းသားတွေလက်ထဲရောက်လာမှာပါ
ခုတော့.. သူတို့ကို တာထွက်ပါစေဦး… သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှု၊ ကျရှူံးမှုတွေကို လေ့လာအတုယူလို့ရတာပေါ့
KFCျကြက် ကျော် က အကောင် ကြီး ပြီး အဆီ လွှာ ရှိတယ် အသားအရသာ ပေါ့တာ ကို ဆား နဲ့ထိမ်းထား တယ် ။ အင်ဒို ကြက် ကျော် က ကြက် အကောင်သေး ပြီး အသားကျစ်ပြီး အ ချို ဓာတ် လေး တယ် ။ Formular ကို အင်ဒိုနီးရှား က အတိုင်း လုပ်ရင်ပေါ့ လေ ။ အင်ဒိုနီးရှား ဘာ လီကျွန်း(Barli)သွား လည် တုံး က စား ဘူး တာ ။ အင်ဒို ကြက် ကျော် ကိုပို ကြိုက် တယ် ။ KFC ကြက် ကျော် က လဲ တိုင်း ပြည် လိုက် ပြီး ပြင် ထား သလားတော့ မသိ ဘူး ။
KFC က နိုင်ငံတိုင်းတူတူပါပဲ.. ကွဲပြားသွားတာက Side Items တွေနဲ့ Sandwich ပါပဲ
ဆားနဲ့ထိန်းထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး.. Original Chicken မှာဆားပါပေမယ့် အဓိက ကတော့ Seasoning ကြောင့်ပါ(အချိုမှုန့်မဟုတ်ပါဘူး)။
မြန်မာ့လျှာနဲ့တော့ ကြာရှည်စားရင် သိပ်အရသာမရှိပါဘူး။ စားခဲ့ဖူးတဲ့ CP ထက်တော့ ကောင်းပါတယ်။
(သိထားတာလေးတွေ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဝေမျှပေးတာပါ၊ ဆရာလုပ်တယ်လို့ မထင်ကြပါနဲ့နော်)
မသိ တာ ကိုရှင်း ပြတာ ကျေးဇူး တင်ရ မှာ ပါ ။KFC သုံး တာမွေး မြူရေး ကြက် ဖြစ်လို့ထင် တယ် ။
KFC မှာ ရောင်းတဲ့ကြက်တွေဟာ မွေးမြူရေးကြက်တွေချည်းပါဘဲ၊ မလေးရှား မှာ စားရတာက အဆီပြင်ပိုများတယ်၊ အင်ဒိုမှာတော့ အသားတုံးသေးတယ်၊ အင်ဒိုမှာ KFC စားတော့မကြိုက်တာ တခုက ထမင်းနဲ့ တွဲပြီး မဖြစ်မနေယူခိုင်းတာဘဲ၊ ကြိုက်တဲ့ အသားပိုင်းတောင်းလဲ မရနိုင်ဘူး၊ ဈေးကွာတယ်တဲ့၊ မလေးမှာတော့ ကြိုက်တဲ့အပိုင်းရွေးယူနိုင်တယ်၊
ရန်ကုန်မှာတော့ တစ်တုံး ၅၀၀ ကျပ်ပါ အခုဆိုရင် ဆွေးနွေးပွဲတွေ ကျောင်းတွေမှာ ရောင်းလို့လက်မလည်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒီမှာရှိတဲ tokyo fried chicken ထက်ကောင်းတယ်လို့လဲပြောကြတယ်။
kai ပြောတာ စဉ်းစားရမဲ့အချက်ပါ။ မြန်မာအများစုက မွေးမြူရေးကို အကုသိုလ်ဆိုပြီး မလုပ်ကြပါဘူး။
ကန်ထဲက ငါးအရှင်လတ်လတ်ကို ဘယ်ငါးကြိုက်လဲ ချက်ခြင်းဆယ် ချက်ခြင်း ကျော်မယ် ချက်မယ်ဆိုရင်တော့
စားဘို့တွန့်နေကြဆဲပါ။ JAFA ကြက်ကြော်လဲ မွေးမြူရေးကြက်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီက KFC ဆိုင် မှာ set-menu နဲ့ a-la-carte ရောင်း တယ် ။ ထမင်း မ ပါဘူး ။ ကြက် တောင်ပံ ကြက်ပေါင် သပ်သပ် စီ လဲ ရ တယ် ။
ကျနော်ကအသားမကြိုက်ဘူး ကြက်ကြော်တွေလဲသိပ်မစားဖြစ်ဘူး ဒါပေမယ့် 
ခုဗဟုသုတတွေရသွားလို့ ဦးဖက်တီးနှင့်တကွ မန်းသူအားလုံး ကျေးဇူးပါ
အသားမစားဖြစ်တာတောင် ကြာပြီပဲ .. ။ပုံလေးပါ ပါရင်တော့ ကောင်းသား… ။